Sibhekwe ngabomvu isinqumo sePSL - Ilanga News
Home Ezemidlalo Sibhekwe ngabomvu isinqumo sePSL
Izodalula okuzokwenzeka ngesizini ka-2019/2020
USIHLALO wePremier Soccer League u-Irvin Khoza.
KULINDELEKE ukuba kushone usuku lwanamuhla ngoMsombuluko sekuphele konke ukuqagela ngonobhutshuzwayo wakuleli njengoba abalandeli beshayisana ngamakhanda kwazise kabaqondi ukuthi kwenzakalani ngawo.
Imidlalo ye-Absa Premiership neyeGladAfrica Championship imiswe ngoNdasa (March) emuva kokuba uMengameli wakuleli uCyril Ramaphosa evale ukusebenza kwezwe ngenxa yokugadla komkhuhlane osubulale inqwaba yabantu emhlabeni jikelele, iCovid-19.
Ngomhla ka-18 kwephezulu bekulindeleke ukuthi ibuye imidlalo emuva kokuba iPremier Soccer League (PSL) yenze konke okufanele yakwethula kuhulumeni wakuleli oyiphakamisele isithupha, wathi kungabuyelwa enkundleni.
Ukungabi nobudlelwano obuhle kwePSL nenhlangano eyengamele ibhola kuleli, iSouth African Football Association (Safa) kuphoqe ukuba imidlalo ingaqhubeki njengoba iSafa ivele yagodla onondweba bayo yathi kabakulungele ukudlalisa ngoba kabekho esimweni esihle.
Ithe bazobe sebekulungele ukudlalisa imidlalo mhla lulunye kuNcwaba (August). Lesi senzo kuthiwa kasehlanga kahle kwi-PSL njengoba kuze kube yimanje ibingakaze ithi vu ngalolu suku olubekwe yiSafa kwazise kuthiwosese, ithole ukuthi onondweba bebevele bekulungele ukudlalisa, yiSafa ebingafuni ukubadedela.
Lo mdonsiswano usuwenze kwasabalala imibiko eyahlukene ngebhola lakuleli. Kuvele ethi imidlalo izomiswa unomphelo kungabe kusaqhutshekwa nesizini ka-2019/2020. Kubuye kuvele ethi kuzoqhubeka eyePremiership, eyeGladAfrica ingaqedelwa ivele iphele.
NgoLwesihlanu isigungu esiphezulu sePSL, iBoard of Governors (BoG) eyakhiwe ngamalungu amakilabhu awu-32 bekufanele sihlangane kodwa lo mhlangano kawubange usaba khona ngenxa yokuthi usihlalo wePSL, u-Irvin “Iron Duke” Khoza ushonelwe ngumkakhe. Lo mhlangano usuzokuba namuhla ngoMsombuluko ngo-11h00.
Kulo mhlangano kulindeleke ukuba uKhoza aqede ukuqagela ngebhola lakuleli. Kubhekwe ukuba kushone elanamuhla sekwaziwa ukuthi imidlalo iyaqhubeka yini noma cha njengoba kuvela ukuthi uKhoza ubephuma engena emihlanganweni nabaxhasi ngeledlule. Cishe isinqumo esizophuma namuhla sizokube sifuqwe ngabaxhasi okuyibona abatshala imali kule ligi.
Nokho kuvela ukuthi kungase kuphume isinqumo esingase sishiye abathandi bebhola bebambe ongezansi. Kuthiwa nabanikazi bamakilabhu baya kulo mhlangano nje, kumnyama kubona, kabazi ukuthi kuyokwenzakalani, bayozwa khona.
“Njengamanje uKhoza noMato Madlala oyisikhulu esiphezulu seligi yibona abaziyo ukuthi kuzophuma isinqumo esithini. Abanikazi bamakilabhu bashayisana ngamakhanda, babiziwe nje, kumnyama kubona, kabazi ukuthi kuzokwenzakalani.
Abanye bamincile ngoba kukhona abafuna imidlalo iqhubeke bese kuzoba khona abafuna ikhanselwe le sizini.
“Kodwa-ke konke kuzocaca emuva komhlangano ngoba iPSL kufanele ikhiphe isitatimende esizobe samukelwe ngo-elethu yiBoG.
“Nokho wukusho nje ukuthi ngu-elethu kwazise iningi labaphathi bamakilabhu livele lithule nje du, lingaphawuli umhlangano uze uyophela kubonakale ukuthi bayesaba,” kusho umthombo wethu oncikene kakhulu nePSL.
ULuxolo “Lux” September wezokuxhumana kwiPSL, ukuqinisekisile ukuthi lo mhlangano usuzokuba namuhla ngoMsombuluko futhi balindele ukuthi uthathe usuku lonke.
Uthi unethemba lokuthi emuva kwawo kuzoba nesitatimende esizothunyelwa kwabezindaba.
Previous articleIsikhulu samaphoyisa ezinsolweni zokuvuma imali “yentshontsho”
Next article‘Ubulale inkosikazi inqaba kudayiswe umuzi’